Al-Shabab oo laysay ciidamo badan oo Kenyan ah & xog sheegeysa in tirada… - iftineducation.com
Al-Shabab oo laysay ciidamo badan oo Kenyan ah & xog sheegeysa in tirada…
iftineducation.com – Warbaahinta kasoo baxda dalka Kenya ayaa daboolka ka qaaday in Dagaal uu dhexmaray Ciidamada Militeriga Kenya iyo Maleeshiyada Alshabaab.
Dagaalka oo ahaa mid in muddo ah socday, ayaa waxa uu bilowday kadib markii Maleeshiyada Alshabaab ay weerar Culus oo gaadmo ah ku qaaday Kolonyo Ciidamo ka tirsanaa Kenya oo xiligaasi kusii jeeday deegaanka Kaambooni ee Gobolka Jubbada Hoose iyagoona kasoo baxay Degmada Lamu ee Gobolka Xeebta Kenya.
Warbaahinta Maleeshiyada Alshabaabka, ayaa qortay in Dagaalyahaanada ay wadada u galeen Kolonyada Ciidanka ah, kadibna ay ku tuureen dhowr Saban oo ay la beegsadeen gaadiidkii ay la socdeen Ciidamada Kenya, iyadoo kolkii dambe uu halkaasi ka dhacay dagaal fool ka fool ah.
Warbixin ay soo saareen Ururka Al Shabaab, ayaa waxay goor dhow ku sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen 20 ka mid ah Ciidamada Militariga Kenya, sidoo kalana ay ku gubeen saddex ka mid ah gawaaridii ay wateen.
Waxaa warkaasi beeniyay Saraakiisha Kenya oo sheegtay in weerarkaasi looga dilay askari kaliya, halka ay Shabaabkuna ka dileen ugu yaraan shan nin.
John Kerry oo berrito ku wajahan Magaalada Paris ee Caasimada Faransiiska